Tababare Klopp oo ka hadlay aragtidiisa kaga aadan sida uu noqon doono horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo socda – Gool FM
(England) 11 Maajo 2019. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa ka hadlay aragtidiisa kaga aadan sida uu noqon doono loolanka horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka soo socda, maadaama kooxaha waaweyn ee loolanka ku jira dhamaantood qaab ciyaareed ahaan ay isku mid yihiin.
Dhammaan kooxaha horyaalka Premier League ayaa ciyaari doona bari oo Axad ah kulankooda ugu dambeeya xili ciyaareedkan ee 38-aad, Manchester City ayaa suuragal noqon karta inay ku guuleysato koobka Premier League markoodii 6-aad taariikhda, hadii ay guul kasoo gaaraan Brighton.
Hadaba tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa sheegay inuu rajeynayo in loolanka horyaalka Premier League uu noqon doono mid aad u adag xilli ciyaareedka soo socda.
Macalinka reer Germany ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in tartanka uu ka dhexeyn doono 4 kooxood, sababa la xiriira inay yihiin kuwo iska agdhow qaab ciyaareed ahaan, farsamo iyo awooda jir haaneed intaba.
“Maxaan ka dhihi karnaa Manchester City?, waxaa laga yaabaa ineysan xumaan doonin xilli ciyaareedka soo socda, taasina waa wax iska cad”.
“Anagana sidoo kale ma noqon doono kuwo xun, laakiin kooxaha kale ayaa sameyn doona soo laabasho si ay ugu dagaalamaan ku guuleysiga horyaalka Premier League”.
Intaas kaddib Klopp ayaa wuxuu ka hadlay farqiga u dhexeeya labada kooxood Liverpool iyo Manchester City wuxuuna yiri:
“Farqiga ugu weyn ee inoo dhexeeya anaga iyo Manchester City iyo afar kooxood ee kale, ma ahan tayada dhanka farsamada, laakiin marka la eego waa joogtaynta natiijooyinka”.
“Joogteynta waa wax la sii wadi karo, waxaana sii kordhi doona kooxaha sida adag u dagaalami doono xili ciyaareedka soo socda, waa inaan hubinno inaan sii wadno wadada saxda ah iyo inaan sameyno waxyaabo sax ah marar badan, si aan u helno mustaqbal fiican”.